Kooxda dacweysay Jen. Samatar oo rajeynaya in laga musaafuriyo Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Koox dad ah oo kasoo jeeda deegaanada Somaliland, kuwaasoo muddo dher dalka mareykanka ka weday dacwad ka dhan ah Jen. Maxamed Cali Samatar ayaa sheegay iney rajo ka qabaan in dacawaddu soo gebegebowdo, islamarkaana jeneraalka laga musaafuri doono dalka Mareykanka.
Guddi caddaaladeed oo fadhigeedu yahay Faransiiska oo arrintan Muwaadiniinta Somaliland kala shaqaysay iyo guddida Somaliland ayaa saxaafadda u sheegay in haatan Kiisku yahay dhamaad islamarkaana Cali Samatar Maraykanka laga mastaaturinayo.
Katin Hopet, oo ka socotay Guddida Caddaaladda iyo daba galka Dambiyada oo ay xaruntoodu tahay Faransiiska iyo Maraykanka, ayaa sheegtay inay muddo dheer daba socdeen Kiiskan, haddana ay ku faraxsan yihiin inay bulshada Somaliland u soo bandhigaan halka uu marayo oo ah meel gabo-gabo ah.
Xubin u hadlay kooxda reer Somaliland kiiskan ee dabada ka riixayay dacwadda ayaa sheegay in dacwada Cali Samatar ay haatan tahay dhamaad.
“Kiiskii Cali Samatar oo nagu qaatay muddo dheer, waxaan idiin sheegayaa inuu haatan gabo-gabo yahay. Wax badan baanu isla soo marray runtii oo dadkuna waa ka dheregsan yahay laakiin, aakhirkii waxay noqonaysaa in laga mastaafuriyo waddanka, Kiiskii ama dacwaddiina, iyo wixii dambi uu umadda ka galayna waxay noqotay wax ku caddaaday oo aanu Maxakamadda horteeda kaga caddaynay. Kaligiina muu ahayn ee rag badan baa jira oo qaarkood meelahaas ku gabadaan, runtiina waxaan filayaa in wax badan la xallin karo” ayuu yiri nin magaciisa lagu sheegay Saleebaan Xuquuq.
Guddida iyo Mawaadiniinta Somaliland, ayaa dawladda Somalia ku bogaadiyay inaanay muddooyinkii u dambeeyay kiiskaasi faro galin sidoo kalena aanay dalban wax dambi ka dhaafis ah. Waxaanu guddida ku bogaadiyay hawsha ay qabteen.
Jen. Maxamed Cali Samatar, ayaa loo haystaa Xasuuqii bulshada Somaliland loo gaystay xilliyaddii uu Xukumaddii Soomaaliya ka ahaa Ra’isal wasaaraha iyo wasiirka Gaashaandhiga.
Dadka dacweynaya Cali Samatar ayaa aaminsan in dad badan oo reer Somaliland ah lagu laayey awaamir uu isagu bixiyey.